トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Mandaitra pachinko nanangona vaovao amin'ny fampiasana ny angon-drakitra Robo toerana Seven
Misy pachinko toerana ny tahirin-kevitra Lobo toerana Fito. Toy izany koa ho toy P-WORLD ny orinasa toerana vaovao ianao, dia afaka mahita toy ny amin'ny fanambanin'ny modely vaovao sy pachinko efitrano, isan-karazany vaovao. Ao
, nefa mety mieritreritra fa na tsy dia mitovy ny P-izao tontolo izao, toy ny anaran'ny tahirin-kevitra Lobo toerana Fito, ato amin'ity toerana, tahirin-kevitra sy manokana pachinko milina tsirairay amin'ny pachinko parlors izay voasoratra anarana modely ny tahirin-kevitra no tonga mba ho hita, dia lasa ambony indrindra ny endri-javatra.
nahita antontan-kevitra, jackpot imbetsaka, manomboka rotational hafainganam-pandeha, dia hita mandra-payout isa. Raha mbola hijanona ao an-trano, Toy izany koa ho toy ny mijery ny antontan-kevitra Robo in pachinko parlors, koa izany no ho azo atao ho an'ny andro manaraka ny sehatra hisafidy.
rehefa manangona ny angon-drakitra ny ara-dal?na indray andro, mandeha ny pachinko fivarotana nakatona talohan'ny, heveriko fa misy fomba maro izay tonga ny manamarika iray amin'ireo tahirin-kevitra iray.
anefa tsy tokony tsy handeha any amin'ny pachinko efi-trano isan'andro, ny asa ihany koa ilaina, indray mandeha ny ratsy fanamarihana, ary aza mandeha any amin'ny toeram-pivarotana ny ampitso, koa ny zava-misy fa ny marina fanazavana tsy fantatrao, fahaiza-miasa mahomby tsy milaza izany manokana.
Noho izany, mahomby ny mampiasa ity toerana Robo rakitra Fito, ary azo atao ny mora aggregate tsirairay avy amin'ny angon-drakitra tsirairay pachinko trano izy.
Voalohany, mamorona ny angon-drakitra latabatra ao an-tokantrano ny solosaina manokana. Any, ny antontan-kevitra Fito Robo toerana ianao, dia mety raha handika ary apetaho table dia nahazo antontan-kevitra. Data mba azo adika dia ny hery manontolo isa bola sy ny isan'ny revolisiona.
in izany, dia lasa azo atao ny mamaritra ny milina iray monja Nizara roa ny faladiany. Raha nanisy raikipohy, ny milina raraka miaraka na ny milina sy ny isan-jaton'ny tanteraka ny andro indray andro, dia tena mety satria azo kajy.
Ny fikajiana ny milina raraka, ianareo dia ho afaka ny hahatakatra tanteraka ny andro sy ny latabatra manokana ny toe-draharaha. Tany am-boalohany dia tsy hita afa-tsy ao pachinko parlors Day Satria nahita ny angon-drakitra tao an-trano, ka afaka manapa-kevitra ihany koa ny sehatry ny tanjona tamin'ny andro teo aloha, raha ny marina mandeha amin'ny pachinko efi-trano, dia ho afaka hifantoka lalandava ny amin'ny fantsika.
fanangonana antontan'isa, satria mandany fotoana sy ezaka, manana zava-dehibe fa ny fomba mora na ny asa marina. Data Robo toerana fito dia toerana izay nahazo ny fisian'ny tahirin-kevitra sarotra eo amin'ny toerana hafa.
Na izany aza, dia afaka mahita ny antontan-kevitra, dia ho afa-pachinko parlors izay voasoratra anarana, pachinko parlors izay halehanao no ho zavatra tsy misy dikany raha tsy voasoratra ara-panjakana. Avy eo, mba hijery ny maha samy hafa ny P-izao tontolo izao, noho izany dia nitodika tany amin'ny vola, mieritreritra aho fa izany no toerana antsoina hoe na heverina ho toy ny volavolan-dal?na vaovao.
mamaky ampahany amin'ny onjam-angon-drakitra, ka raha ny marina izahay fa toy izany koa amin'ny pachinko efi-trano, dia tsy isalasalana fa Preference. Dia mety ho mora foana tsy misy ny fampiasana ny fotoana, satria dia angon-drakitra utilisation fomba, manandrana.